Kooxda Man City oo hoggaaminaysa liiska kooxaha 100-dhibcood ku qaaday horyaallada Waddankooda – Gool FM
Byare May 14, 2018
Xilli ciyaareedkan 2017-18 kooxda Manchester City ee Waddanka Ingiriiska ayaa 100-dhibcood ku qaaday horyaalka Premier League, waxaana ay ka mid noqotay kooxaha caanka ah ee horyaallada dalalkooda ku qaaday 100-dhibcood ama ka badan.
Kooxaha Yurub ugu caansan ee 100-dhibcood ama ka badan ku qaaday shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub hal xilli ciyaareed gudihiis, waxaa sidoo kale ka mid ah Real Madrid, Barcelona iyo Juventus.
Kooxda Pep Guardiola ayaa xilli ciyaareedkan 100-dhibcood ku hanatay horyaalka Premier League waxaana ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee horyaalka Ingiriiska dhibco sidaas u badan ku qaadda.
Haddaba waxaan halkaan hoose idin kula wadaageynaa kooxaha caanka ah ee horyaalladda dalalkooda ku qaaday boqol dhicbood ama in ka badan iyo xilli ciyaareedyadii ay sidaas sameeyeen:-
>- Kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee 100-dhibcood ku qaada horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2011-12.
>- Kooxda Barcelona ayaa rikoorkaas iska barbareysay waxaana xilli ciyaareedkii xigay ee 2012/2013 ay horyaalka La Ligaha Spain ku qaadeen 100-dhibcood.
>- Kooxda Juventus ayaa xilli ciyaareedkii 2013-14 horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga ku qaadday 102-dhibcood, waana kooxda dhibcaha ugu badan ku qaadday horyaalkeeda shanta horyaal ee ugu caansan Yurub.
>- Kooxda Manchester City ayaa xilli ciyaareedkan 2017-18 horyaalka Premier League ku qaadday 100-dhicood, waxaana ay sidaas ku noqotay kooxdii ugu horreysay ee rikoorkan loo diiwaan geliyo gudaha Ingiriiska.